Ubuntu 11.10 iyatholakala | Kusuka kuLinux
Abaningi babeyilindele nenguqulo entsha yokusatshalaliswa okudume kakhulu nokuphikisana kwe- I-GNU / Linux: Ubuntu Oneric Ocelot.
Sivele sakhuluma ngezindaba, kepha ngizongena esihlokweni ngokuphelele lapho ngilanda i-.iso bese ngiyizama. Ukuthi uma ngangididekile kwakungeyona entsha Ubuntu Uhambo, kumnandi nje 😀
Izixhumanisi zokulanda ku lesi sixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ubuntu 11.10 iyatholakala
Uhambo oluhle kakhulu
Sesivele siyi-2. Ngangihlabeke umxhwele ngohambo… I-HTML5 yi-ostia LOL !!!
Nami ngingasho okufanayo. Wumqondo omuhle kanjani lolu Hambo, ngakho-ke akudingeki ukuthi uzame Ubuntu 😛
Sengivele ngiyifakile, bheka iSoftware Center, kuhle! I-Unity 2D ifana kakhulu nenguqulo ye-3D. Uma ngiya kufaka i-Envy's Proprietary Driver ngithola izinketho eziningi ngakho-ke angikakafaki.
Uhambo luhlaba umxhwele ngempela! Ngizamile injini yokusesha yakwaGoogle futhi ngiyamangala ukuthi izosesha ngokushesha kunendlela ejwayelekile!
Siyakuhalalisela Ubuntu ngosuku lwakho….
Umsebenzi abawenzile ubumuhle impela. Ngeke ngimangale ukubona Ubuntu begijima efwini maduzane.
Yebo, ngizifaka phakathi kwalabo abazozama ezinsukwini ezimbalwa noma emasontweni. Ake sibone ukuthi kuhamba kanjani!
Ngendlela, njengoba ngangifunda ku http://www.pillateunlinux.com/ubunticias/ UDell uzothengisa kabusha amanye amakhompyutha nge-Ubuntu efakwe kuqala, ngemuva kokuthi eyeke ukwenza kanjalo isikhashana; yingakho isithombe sokukhangisa sika-Oneric sivela kwi-laptop yalowo mkhiqizo.
Lezi yizindaba ezinhle. Ngikhumbula ngifunda ngakho, kepha kimi kubonakala sengathi bekungama-desktops, hhayi ama-laptops. Ngale ndlela, kuzoba yisinyathelo esikhulu phambili uma uDell ephinda akhuthaza ukusetshenziswa kwe-Ubuntu.
Ngicabanga kanjalo futhi ngiyethemba ukuthi itholwa kahle ngabathengi futhi, ngokuzayo, abanye abakhiqizi babheja kwi-Linux distro njengenye indlela.